avylavitra · Oktobra 2010 · Global Voices teny Malagasy
avylavitra · Oktobra, 2010
Lahatsoratra farany an'i avylavitra tamin'ny Oktobra, 2010
Repoblika Dominikana : fepetra hiadiana amin'ny kolera
Karaiba 31 Oktobra 2010
Maherin'ny 270 no matin'ny kolera tany Haïti ary manodidina ny 3000 no tratry ny aretina. Ny fipariahan'ny valanaretina, izay tao amin'ny tanànan'i Saint Marc no niantomboka, dia niitatra hatrany amin'ny renivohitra haitiana, Port-au-Prince, izay nahitàna tranga iray voamarina omaly. Ireo manampahaizana avy amin'ny OPS [Organisation panaméricaine de la Santé] fa fotoana no isaina dia ho tonga any amin'ny tany dominikana ny kolera. Mihetsika ireo mpitoraka bilaogy.
Azia Atsinanana 30 Oktobra 2010
Gresy: Mitokona tsy hihinan-kanina ireo mpitsoa-ponenana Iraniana
Eoropa Andrefana 30 Oktobra 2010
Mpitsoa-ponenana Iraniana dimy ambiroampolo ao Athens, Greece no nitokonana tsy hihinan-kanina nanomboka ny 14 Oktobra mangataka amin'ny manampahefana Grika mba handinika ny antontan-taratasy fangatahan'izy ireo fialokalofana ara-politika. Nanjaitra ny vavany ny sasany amin'izy ireo.
Zimbabwe: Minisitry ny Varotra sy ny Indostria mampiasa twitter mba hamoahana ny adin-tsainy
Afrika Mainty 29 Oktobra 2010
Ny 22 Oktobra 2010, i Hope, zimbaboeiana mpitoraka bilaogy, dia nahamarika fitorahana twitter nirarak'ompana avy amin'ny Professeur Welshman Ncube, Minisitry ny Varotra sy ny Indostria ao Zimbabwe sady Sekretera Jeneralin'ny antoko MDC.
Fahalalahàna miteny 23 Oktobra 2010
Setroka be mandrakotra an'i Singapore
Azia Atsinanana 23 Oktobra 2010
Setroka be ao Singapore sy ny Atsimon'i Malezia! Tondroin-dry zareo ho avy amin'ny fandoroana ny hazo tany Sumatra, Indonezia izay fanaon'ireo tantsaha ho fanomanany ny fotoam-pamafazany izy io. Mikohaka sy mitaraina ny mponina. Mahafanimpanina ny besinimaro ilay setroka ary mangotrakotraka momba izany ny aterineto
Siria: Iza no mandray $42,000 isam-bolana?
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 21 Oktobra 2010
Siria, izay firenena sosialista teo aloha, dia nanomboka ny ezaka fanatsarana ny ara-toekarenany tany amin'ny faramparan'ny 2003 tany. Nitondra haingana be nankany amin'ny firoboroboan'i Siria ilay ezaka'
Nomad Green: Dinika an-databatra boribory rehefa Sabotsy
Rising Voices 20 Oktobra 2010
Singa iray niampy tamin'ireo atrikasan'ny andro Sabotsy ireo ny fanatrehan'ny lehiben'ny vondrom-piarahamonina iray teo an-toerana izay nanaiky ny fanasan'ny tetikasa azy mba hiresadresaka sy handray anjara amina latabatra boribory miaraka amin'ireo olon-tsotra mpampita vaovao. Ny vahiny vao haingana tao dia ny Minisitry ny Vola taloha tao Mongolia sy ny Tale mpanatanteraky ny Fikambanam-pirenen'ireo Mongoliana Mpitrandraka Harena ankibon'ny tany.
Arabia Saodita: Antso ho fanavotana an'i Samar Albadawi
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 19 Oktobra 2010
Samar Albadawi, vehivavy Saodiana iray nisara-panambadiana no tazonina ao amin'ny fonjan'i Brayman ao Jeddah amin'izao fotoana fa hoe tsy nankato an-drainy. Raha nisafoaka ny mponin'ny aterineto sasany , ny hafa kosa kely finoana momba ny tranga mahazo azy ary mbola mitohy foana ny adihevitra eo amin'ireo Saodiana mpitoraka bilaogy sy mpandefa bitsika 'tweets'.